कतै तपाईका सन्तान पनि तेस्रो लिङ्गी त छैनन्, यो उमेरमा यसरी गर्नुहोस् पहिचान
scheduleसोमवार आषाढ़ ३० गते, २०७६
एजेन्सी, ७ माघ । प्रत्येक बुवा आमा आफ्ना सन्तानको भविष्यलाई लिएर चिन्तित हुन्छन् । उनीहरुको यो चिन्ता तब झन् तिब्र हुन्छ जब उनीहरुले एकाएक आफ्नो सन्तान अरु आम बच्चाहरु भन्दा फरक रहेको थाहा पाउँछन् वा बच्चाको वास्तविक रुपलाई पहिचान गर्छन् । त्यस्ता अभिभावकहरुमाथि कस्तो आपत गुज्रिन्छ, जब उनीहरुले आफ्नो सन्तान न महिला न पुरुष वास्तवमा तेस्रो लिङ्गी भएको थाहा पाउँछन् ।
जीवन त्यो समय मृत्युभन्दा कष्टदायी हुन्छ, जब यस्ता तितो सत्यसँग सम्झौता गरेर प्रतिकूल समाजसँग डटेर अगाडि बढ्नुपर्छ । इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटीका च्याप्टर हेड तथा फर्टिलिटी एक्सपर्ट चिकित्सक रणधीर सिंहका अनुसार तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिमा महिला र पुरुष दुबैको गुण हुनसक्छ ।
आज हामी तपाईलाई आफ्नो सन्तानलाई सुरुवातबाट नै उसको वास्तविकतालाई पहिचान गर्न मद्दत गर्ने उपायहरु सिकाउने छौं ।
चिकित्सक रणधीर सिंहको अनुसार गर्वधारणको पहिलो तीन महिनाभित्र शिशुको लिंग बन्न सुरु हुन्छ । त्यसो त अधिकांश मामिलामा शिशुहरु तेस्रो लिङ्गी हुनु पछाडीको कारण अज्ञात छ । तर शिशुको लिङ्ग निर्धारण हुने समयमा कुनै चोट, विशाक्त खाना, हर्मोन समस्या जस्ता विभिन्न कारणले उनीहरुमा दुबै लिङ्गको गुण आउनसक्छ ।
तर गाजियावादको चन्द्र लक्ष्मी अस्पतालकी महिला विशेषज्ञ चिकित्सक रितु तिवारी सहगल मानिसमा यौनावस्था आएपछि मात्र उ तेस्रो वा समलिङ्गी हुने नहुने कुरा निर्धारित हुने विश्वास राख्छिन् । यौनावस्थामा मस्तिष्कमा केही रसायनहरु उत्सर्जन हुन्छन्, संचार हुन्छन् जसलाई हामी हर्मोन भन्छौं । यसले नै मानिसको शरीरमा परिवर्तन ल्याउँछ । यही समय यदि तपाईको बच्चा उसको लिङ्ग विपरित काम गर्छ र रुची देखाउँछ भने बच्चाले तेस्रो वा सम लिङ्गतर्फ इशारा गरेको बुझ्नुपर्छ ।
बच्चा बेलासम्म बालबालिकाका हरेक आवश्यकता, खुराक र शौखहरु आमा बुवाको आदेश र इच्छामा निर्भर रहन्छ । तर जब यी ठूला हुन्छन् तब आफ्नो इच्छाअनुरुप काम गर्दै जान्छन् । विशेषज्ञको अनुसार यो ठिक त्यो समय हो जब तपाईले आफ्नो सन्तानको वास्तविक पहिचान पत्ता लगाउन उनीहरुलाई ध्यान दिनुपर्छ । जब छोरीले महिलाको कपडा न मन पराउने र छोरालाई गुलाबी रंगको रंगीचंगी कपडा मन पर्न थाल्छ भने तपाईले यी कुराहरुको ध्यान राख्नुपर्छ । तर यो कहिलेकाँही आम कुरा पनि हुनसक्छ ।
जानकारहरुका अनुसार यदि तपाईको सन्तान सधैं आफ्नो लिङ्गका मानिसहरुको ट्वाइलेटको सट्टा विपरित लिङ्गीको ट्वाइटलेट जान खोज्छ भने त्यसलाई पनि तपाईले ध्यान दिनु जरुरी छ ।
कुराकानी गर्ने तरिका पनि एउटा आधार हो लिङ्ग पहिचान गर्ने । यसको माध्यमबाट तपाई सजिलै छुट्याउन सक्नु हुन्छ ।
के तपाईंलाई थाहा छ भुटानका यी २८ राजनीतिक विशेषताहरु ?
समुन्द्रमुनि गएर प्रेम प्रस्ताव !
संघर्षका दिनहरुः संसारकै धनी जेफले आफ्ना पितालाई यसरी सम्झिए
‘के तपाई भगवान हो ?’ यस्तो छ बुद्धको ब्युँझाउने जवाफ
कसैलाई तत्काल विश्वास गर्नुहुन्छ ? होस् गर्नुहोस्
नक्कली खुट्टा लगाएपछि खुसीले यसरी नाँचे बालक (भिडियो)
सफल मानिस र राम्रो नेता बन्न तपाईंसँग चाहिन्छ यी चार गुणहरु
कौटिल्य ज्ञानः यी दुई गल्ती गर्दा मानिसको पतन हुन्छ
जीवन शैली, प्रदेश, प्रदेश १
जहाँ हिन्दू युवासँगै होली खेल्छन् मुस्लिम युवा
जीवन शैली, फिचर पोस्ट, स्वास्थ्य
के बिहान चाँडै ब्युँझन आवश्यक छ ?
शाकाहार प्रचार गर्ने कम्पनीका मालिकले अण्डा खाएपछि …
चितवनका होटलमा आपत्तिजनक अवस्थामा ९७ जना पक्राउ
फाइल फोटो चितवन, ३० असार । चितवनमा नेपाल प्रहरीले होटलहरुमा एकैसाथ ठूलो अपरेशन चलाएको छ । अवैध यौन धन्दा बढिरहेको गुनासो आइरहेका...
आज राति खण्डग्रास चन्द्रग्रहण लाग्दै
काठमाडौं, ३० असार । आज मध्यरातमा खण्डग्रास चन्द्रग्रहण लाग्दैछ । आषाढशुक्ल पूर्णिमाका दिन मंगलबार राति अर्थात् असार ३१...
काठमाडौँ, ३० असार । भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोका छोरा निकोलस अर्नेस्टो मादुरो गुयरा ‘गुपचुप’ काठमाडौंमा छन्...
काठमाडौँ, ३० असार । भारतीय पक्षले शनिबार राति सप्तकोसी ब्यारेजका ‘५६ वटै ढोका खोलेको’ थियो । त्यस बेला पानीको बहाव ३ लाख ७१...
काठमाडौँ, ३० असार । सरकारले छुट्टाछुट्टै संयन्त्र परिचालन गरी नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको विप्लव समूहसँग वार्ताको तयारी...
बाबुरामको बसका यात्री
सुधीर नेपाली पछिल्लो समयमा देवेन्द्र पराजुली र कल्पना धमलालगायतका सहयोगीहरुले डा. बाबुराम भट्टराईलाई छाड्नुभयो । त्यसभन्दा...
काठमाडौँ, ३० असार । सरकारले इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीसित सल्लाह गरी उपत्यकामा मेलम्चीको खानेपानी ल्याउने मिति तय गरेको...
काठमाडाैं, ३० असार । मनसुन न्यून चापीय रेखा नेपालको तराई भूभागमा अवस्थित रहेको अझै केही दिन देशभरि नै मनसुनी गतिविधि सक्रिय...